Lasa gaboraraka tanteraka ny fivezivezen’ireo fiarabe izay tokony ho amin’ny alina ihany vao afaka miditra eto an-drenivohitra. Eny amin’iny lalam-pirenena fahafito iny, toa an’Ankadimbahoaka sy Andoharanofotsy ary mipaka hatreny Tanjombato dia izy ireo avokoa no mameno ny lalana ankehitriny. Mila mandray fepetra hentitra fa sempotra Antananarivo izay mila fandaminana matotra.
Manomboka eto dia ny « caméra de surveillance » mipetaka eny amin'ny lalana amin'izao no hangalana ny porofo rehetra hanaovana fanadihadiana momba ireo loza miseho eny amin'ny lalana. Hanalefahana ny fitohanan'ny fifamoivoizana ihany koa izy ireny na dia tsy mbola hahasahana an’Antananarivo manontolo aza. Nametrahana koa etsy Ampasampito izay faritra mbola ahitana fitohanana goavana. Enga anie ka tsy ireo fitaovana ireo indray no mbola hisy hangalatra koa.
Tanora miisa 22 no indray naratra mafy vokatry ny lozam-pifamoivoizana nitranga tany akaikin’i Port Bérgé. Izy ireo dia eo anivon’ny Sampana Tanora Kristiana (STK) ao amin’ny fiangonana protestanta ao Antalaha. Notaterina tao amin’ny toeram-pitsaboana akaiky indrindra izy ireo ary ny fiangonana Zoara ao Mampikony no nanampy ireo naratra tamin’ny fiantohana ny rehetra
LALANA ETO IARIVO
Efa feno dian-kodiarana sahady ireo lalana vao nolalorina teto an-drenivohitra. Vao miala kely eo izany ireo mpanao lalana dia efa misy manararaotra mampiasa sahady ny lalana kanefa tsy maina ny « goudron » na « bêton » izay nanamboarana azy. Rariny ihany ilay sinoa izay sefon’ny fanamboarana tetsy Ankadimbahoaka raha nahavita nikasi-tànana ilay olona tsy nieritreritra akory fa avy dia nitondra ny fiarany teo amin’ny lalana tsy mbola vita. Mila andrasana toy ny omby ve ?
Taolam-paty amin’ny gony maromaro no tratra tetsy Miarinarivo. Mbola betsaka ihany izany no voafitaka amin’ity raharaha iray ity satria hatreto dia tsy nisy fanadihadiana ara-tsiantifika mihitsy izay nilaza fa misy ilàna azy ny taolam-paty. Tamin’ny tranga maro izay efa narahana rahateo dia tsy hita akory ny tena mpividy any amin’ny farany. Ireo mpitatitra sy mpamaky fasana hatrany no tratra farany ary tsy mahafantatra akory ny mpaniraka azy.
Sasa saro-tadiavina koa izao ny fanafody « Insuline » izay natokana ho an’ireo mararin’ny
Diabeta. Tsy misy fanazavana akory na inona na inona eny amin’ny farmasia sy ny hopitaly fa dia hoe tsy misy fotsiny. Mitaraina ireo mararin’ny diabeta satria tsy azo ajanona izy ireny fa mety mitarika ny fiakaran’ny tahan’ny siramamy avy hatrany ary izany indray avy eo no mety hanimba ny voa, io farany izay tsy misy fanafodiny eto amintsika.